Ifowuni: +86 13539497057 (Whatsapp / Wechat) | Imeyile:meiyiyoule@gmail.com
Umatshini woMdlalo weSwing
Umdlalo weMidlalo yoMntwana
Umatshini woMdlalo weSipho
Umatshini wokudlala weCapsule
Uzipho Crane Machine
Omnye uMatshini weSipho
Isikere Ibhaso loMatshini
Umdlalo weMidlalo yoMdlalo
Umatshini weBhola yeBhola
Umdlalo womdlalo wamanqindi
Itafile yebhola ekhatywayo
Umatshini woMdlalo weSimulator
Ukulinganisa uMatshini woMdlalo
Umatshini wokubaleka weSimulator
Umatshini wokudubula weSimulator
Umdlalo wokulwa weArcade
Ukudubula ibhola / umatshini wamanzi
Coin Pusher Umatshini
Ityala kunye neMiboniso
Coin eziqhutywa lollipop wokuthengisa kumatshini umdlalo ilekese ma ...
Umatshini wokufika omtsha osebenza ngeCapsule Toy Vending Machine
Iingqekembe zomatshini ezisebenza ngengqekembe yomatshini womdlalo wabadlali aba-6
Ukuzonwabisa kwe-Euqipment Umatshini wemali enye yokuqhubela umdlalo
Ingqekembe Hot intengiso eziqhutywayo pandora Arcade games machine ...
Imali eziinkozo zisebenza kwimidlalo yebhokisi ye-panda ye-32LCD yemidlalo ye-arcade ...
Umhla wepinki umatshini weSikere
Ingqekembe entsha yokufika esebenze umntwana we-3D ekhwele idayinaso sh ...
Ingqekembe entsha yokufika esebenze ngenqwelomoya yenqwelomoya yokukhwela umntwana ...
Ingqekembe entsha yokufika eqhutywa zii-3D kiddie ride -fire truck ...
Ingqekembe entsha yokufika eqhutywa ngumntwana we-3D ekhwele imoto yamapolisa ...
Coin eziSebenzayo 3d Motor Kiddie Ride Video Imidlalo Swing ...
Iimali eziSebenzisiweyo zeHlabathi yamaHashe amaKhwenkwe amaKhwela kwiVidiyo yeMidlalo yeSwing ...
Umatshini oSebenzisiweyo woMatshini oSebenzayo Umdlalo weVidiyo oSwilayo
Ingqekembe entsha yokufika esebenze i-3D kiddie ukukhwela amapolisa-imoto ngomatshini wokubaleka iimoto
1. Uyilo olukhethekileyo lweemveliso, ezintle kunye nesisa, imilo ethandekayo, ukukhanya okumibalabala, okunomtsalane kakhulu!
2. Umdibaniso ogqibeleleyo womatshini wokukhwela umntwana kunye nomdlalo wokubaleka， abantwana bayakonwabela ukonwaba xa befumana ukhuthazo kunye nolonwabo kwimidlalo yokusebenzisana! Inomdla ngakumbi, umvuzo ophezulu!
Umatshini oSebenzisiweyo woMdlalo we-3D / MP5 Umatshini wokukhwela abantwana
1. Inkangeleko entle, umculo omnandi, othandwayo ngabantwana.
2. Abantwana xa beqhuba, ngelixa bonwabela umdlalo osebenzisanayo! Inomdla ngakumbi, umvuzo ophezulu!
3. Zininzi iindidi zemidlalo, kwaye ukhetha into ofuna ukuyidlala.
Iimali eziSebenzayo ze-3D zeKiddie zihamba ngomatshini wevidiyo
Iingqekembe ezisebenza nge-lollipop kumatshini wokuthengisa umatshini weelekese
Inkangeleko yalo matshini yenzelwe iilekese njengomxholo. Izibane ezintle, iipateni ezintle zekhathuni, imibala eqaqambileyo Abantwana bayayithanda kakhulu. Le mveliso yotyalo-mali oluncinci, ukubuya ngokukhawuleza, akukho mngcipheko, kufanelekile kuluhlu olubanzi.
Ingqekembe yasebenza umatshini weelekese ozenzekelayo
Ingqekembe yokuthengisa eshushu esetyenzisiweyo imidlalo yomoya ihoki yomdlalo wetafile
1. Abantwana badlala nabazali, abanye abahlobo badlala kunye, kumnandi ngakumbi
2. Yenziwe ngeglasi yefayibha, yomelele kakhulu kwaye ihlala ixesha elide
3. Ixabiso eliphantsi, umvuzo ophezulu!
4. Iindawo ezikumgangatho ophezulu kumatshini, zihlala ixesha elide ukusebenzisa.
5. I-Mainboard isebenza ngokuthe chu
6. Ukunikezelwa kwamandla okuphezulu, okuzinzileyo okusebenzayo.
Ingqekembe esebenzayo yoMculo woMdaniso woMdlalo woMdlalo
1. Umdlalo wokudanisa odidi oluqhelekileyo, dlala ngokulula kwaye unomdla
2.Ukubeka iliso kwinkcazo ephezulu kukunika amava aBonwayo
3. Inkqubo yesandi yestereo itsala iindlebe zakho.
4. Uyilo lwefashoni. Ukukhanya kombala
Ukuzonwabisa kwe-Euqipment Coin eSebenzayo yoMdaniso woMdlalo woMdlalo
1. Umdlalo oqaqambileyo kunye noqobo, umculo omnandi onomdla kuwo wonke umntu.
2. Umboniso we-55 intshi ye-HD LCD ikunika amava abonisayo
3. Uyilo lwembonakalo yefashoni, i-LED enemibala, intle kwaye inomdla.
4. Iithoni zomculo ezimangalisayo, umculo opholileyo opopayiyo, ilizwi elikhuthazayo, lijika ngokulula libe ngumdanisi opholileyo, iingoma ezininzi ezikhethiweyo.
Inkqubo yesandi yestereo ikwenza uzive uyinyani.
6. Ukuxhaswa kamva okuxhasiweyo, Nika inkqubo kunye nomculo omtsha.
7.Lungiselela iziko lokuzonwabisa, iziko lezemidlalo, indawo yokuthenga, ipaki, iiholide, ipaki yomxholo njl.
Iingqekembe eziSebenzisiweyo zoMdaniso woMdlalo woMdlalo weVidiyo yeMidlalo yeArcade
1. Umboniso we-55 intshi ye-HD LCD ikunika amava abonisayo
2. Uyilo lwembonakalo yefashoni, i-LED enemibala, intle kwaye inomdla.
3. Iithoni zomculo ezimangalisayo, umculo opholileyo opopayiyo, ilizwi elikhuthazayo, lijika ngokulula libe ngumdanisi opholileyo, iingoma ezininzi ezikhethiweyo.
5. Ukuxhaswa kamva kuxhaswe, Nika inkqubo kunye nomculo omtsha.
6.Lungiselela iziko lokonwaba, indawo yezemidlalo, indawo yokuthenga, ipaki, iiholide, ipaki yomxholo njl.
Imali esetyenzisiweyo ye-3d ye-Kiddie Ride yeVidiyo yeMidlalo yeSwing Machine
Le ngqekembe isebenze 32 intshi pandora Arcade games machine for 2 players
1. Ngaphezulu kwama-3000 imidlalo yakudala, umdlalo onomdla wokulwa
2. Abadlali ababini; dlala nabahlobo, kumnandi ngakumbi!
3. I-chassis yensimbi, yomelele kwaye yomelele.
4. Iindawo ezikumgangatho ophezulu kumatshini.
5. Ngesisombululo esiphakamileyo esingu-32 intshi ye-HD HD screen.
6. Ngokukhanya okumibalabala, kunomdla kakhulu
7. Uluhlu olubanzi lwesicelo. Ixabiso eliphantsi, umvuzo ophezulu!
101 Hayi 9, empuma-ntshona Cross Street, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China